Dhijitari Kushambadzira - Victor Mochere
Chipiri, January 18, 2022
Isu tinosundidzira hashtag / keyword yako kuita on Twitter (Kenya Trends). Kuendesa zvinyorwa zvako (zvinyorwa, mifananidzo uye mavhidhiyo) zvakanyanya paTweets kusvikira iyo hashtag / keyword ichiiswa panzvimbo yezvinotenderera misoro muKenya. Iyi ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekugadzira kuziva, kuwana traffic uye kuita.
Isu tinobata nhoroondo dzenyu dzezvemagariro ezvemagariro evanhu kuti tivone kuti ivo vanopihwa zvirimo nguva nenguva uye zvakare panguva imwecheteyo vachikura maakaunti ako. Ini ndinoyedza kufunga nezvekodhi yekuvandudza izvo zvinoisa zvinoratidzira, kubatanidzwa uye kuti yako madhijitari mapuratifomu anoratidza yakanaka brand mufananidzo.
Isu tinodzora, tinogadzirisa, uye tinoburitsa ezveruzivo chero munzira (zvinyorwa, mifananidzo kana vhidhiyo) pane ako mapuratifomu enhau, nenguva uye nenzira yekuita.
Isu tinoshambadza yako mhando, zvigadzirwa uye masevhisi tichishandisa dijiti chiteshi (kureva maakaundi enhau enhau uye vamwe pane zvavanoda). Izvi zvinosanganisira Social Media Kushambadzira uye Kushambadzira.
Isu tinoedza kuvamiriri vevamiriri vechina nevatambi vakasimba, vanoonekwa zvakanyanya mumagariro ekumusoro kwemunda wavo. Izvi zvinosanganisira kuziva, kutsvagurudza, kushandira pamwe nekutsigira vanhu vanogadzira kukurukurirana kwakakanganisa kutaurirana nevatengi vako.
6. Tsvaga Engine Optimization (SEO)
Isu tinotyaira traffic kubva kune "yemahara," "organic," "edhisheni" kana "zvakasikwa" mitsva yekutsvaga pazvinjini zvekutsvaga kusimudzira kuoneka kwewebhu webhusaiti yako kana peji rewebhu mune mitezo yeinjini yekutsvaga isina kubhadharwa.
Ndapota taura nesu yemitengo uye zvimwe zvinhu.
Facebook-f Twitter Instagram Pinterest LinkedIn Youtube teregiramu RSS
Dharira purogiramu yedu
Google-tamba Kutenga-bhegi Amazon
Nyorera kune yedu tsamba uye uwane izvo zvawakatumirwa kutumira kune yako inbox.
* Tinovenga spam sezvaunoita iwe.
Titumire musoro wenyaya
Victor Mochere aiva